U-Amber Frey, owayengu-Mistress of Murderer uScott Peterson
Imiba Izigebengu eziziwayo
Iprofayile ka-Amber Frey, owayengu-Mistress of Murderer uScott Peterson
by UCharles Montaldo
I-Whirlwind Affair kwi-Lead-Up to Murder
U-Amber Dawn Frey wayeyinkosikazi yombulali onecala uScott Peterson . U-Peterson ufunyaniswe enetyala lokubulala umkakhe, uLaci, nomntwana ongakazalwa ngo-2002. I-Frey yeveki yeeveki ezintandathu kunye noPeterson yayibonakala ngethuba lolwaphulo-mthetho lwe-2004. Wayeyindoda ebalulekileyo ekushushisweni kwakhe. U-Peterson ngoku ugwetyelwe ukufa ngenxa yejoza elibulalayo ehlala kwi-Death Row eSan Quentin State Prison.
Amanqaku alandelayo ngobudlelwane obufutshane beFrey kunye noPeterson beza ngqo kwiFrey njengoko echaza ukutshatyalaliswa okufutshane kunye neziganeko ezikhokelela kuLaci Peterson ukunyamalala kwi-Oprah Winfrey Show.
Ezinye iinkcukacha zobomi bukaFrey ziye zavezwa ngokubanzi ngabahlobo, abahlobo kunye nabaxhamli.
Ubomi bokuqala beFrey
UFrey wazalwa eLos Angeles, eCalifornia, ngoFebruwari 10, 1975, kuRon noBrenda Frey, abaqhawula umtshato xa beneminyaka emihlanu ubudala. Waphumelela kwiClovis High School ngo-1993 waza waya kwiKholeji yaseFresno City apho wafezekisa i-degree of associate in development child. Wayeqhubela uqeqesho olongezelelweyo kwi-massage ye-Golden State College eFresno, eCalifornia.
UFrey noPeterson baxhumeke
U-Peterson noFrey baxhunyaniswe nomhlobo omkhulu kaFrey, uShawn Sibley. I-Sibley yadibana noPeterson kwinkomfa yenkampani e-Anaheim, eCalifornia, ngo-Oktobha 2002. I-Sibley ithi uPeter wamxelela ukuba wayengatshatanga kwaye wayefuna ukuhlangabezana nomfazi okhaliphile ukuba abe nolwalamano olude kunye naye. I-Sibley yaxelela uFrey ngoPeter. UFrey wavuma ukuxhumeka kwifowuni. U-Peterson waqhagamshelana noFrey ekuqaleni kukaNovemba kwaye benza usuku lokudibana kamva ngenyanga.
Ngomhla kaNovemba 20, 2002, uFrey wahlangana noPeterson kwi-bar. Apho bahlala i-champagne kunye nama-strawberries emva koko bayeka ukuba badle egumbini labucala kwindawo yokudlela yaseJapan. Incoko yabo yahamba ngokulula kwaye u-Amber wayeziva ukuba iScott yayilula ukuba ibe lula. Emva kokudla isidlo, bahamba kwi-bar bar, bahlabelela, bahamba bexakeka kude kube i-bar ivaliwe.
Babuyela ekamelweni lehotele likaScott Peterson apho baqala ukutshatyalaliswa baze baphelisa ubusuku bonke.
U-Amber uchaze uPeterson njengomntu omthandana naye kunye nentombi yakhe eneminyaka engama-20 ubudala, u-Ayianna, ngokubandakanya umntwana wakhe ngezinye zokuphuma kwabo kunye. Ngenxa yeholide yokubonga, u-Peterson wachazela uAmber ukuba uya kuba uhambo lokuloba e-Alaska. Kuze kube ngolu hlobo, uPeter akazange akhulume ku-Amber ukuba wayetshatile kwaye umfazi wakhe uneminyaka engama-7 ekhulelwe.
Ulwalamano lwaqhubeka lukhula phakathi koFrey noPeterson. U-Peterson wenza ukutya okuphekwe ekhaya ngoFrey no-Ayianna. Wathatha i-Ayianna Christmas tree shopping. Esi sibini sixoxisana ngokunyanisekileyo ngobomi kunye neemvakalelo zabo. UPeterson wathenga izipho zeFrey ezibonakalisa uvakalelo lwakhe kwiingcamango ayezixelele naye. UFrey ukhumbula enye ingxoxo enje yayijolise ekubalukeleni kokuthembela kobudlelwane. Ngethuba le ngxoxo, uPeter waxelela uFrey ukuba wayengakaze atshate.
Ngomhla kaDisemba 6, 2002, umngane ongcono kaFrey, uSibley, wafumanisa ukuba uPeter ubetshatile kwaye wayesongela ukumtyhila kuFrey.
UPetererson wachazela uShawn ukuba wayelahlekelwe ngumfazi kwaye nangona kwakunzima kuye ukuthetha ngaye, wayeya kuxelela uFrey. NgoDisemba 9, watshela uFrey ukuba wayetshatile waza walahlekelwa ngumfazi kodwa wakuthola kunzima ukuthetha ngaye. UFrey wambuza ukuba wayelungele ulwalamano naye, kwaye uPeterson wathi ngentshiseko ukuba nguye.
Ubudlelwane bufumana ngakumbi ngakumbi
UFrey noPeterson baya kwi-party yaseKrisimesi ngokusemthethweni ngoDisemba 14. UFrey wazisa uPetererson kubahlobo bakhe njengentombi yakhe. Kamva ngaloo busuku balala ngesondo ngaphandle kokusebenzisa ulawulo lokuzalwa. UPetererson wayethi wayengafuni abantwana kwaye wazisola ngokungathathi amanyathelo. Watshela uFrey ukuba uya kuphakamisa ngokuzithandela intombi yakhe njengeyakhe, kodwa ukuthintela ukuba kungenzeka ukuba uFrey ukhulelwe, wayeqwalasela i-vasectomy.
UFrey wafumana isityhilelo sakhe esiphazamisayo ekubeni wayefuna enye intsapho ngelinye ilanga.
UFrey ufunda ukukhohlisa kukaPeterson
UPeterson watshela uFrey ukuba uya kuba eParis iminyaka emitsha. Wayembiza rhoqo ebudeni bakhe. NgoDisemba 29, uRichard Byrd, umhlobo kaFrey kunye no-Fresno obulalayo, uxelele uFrey ukuthi u-Peterson utshatile kwaye umfazi wakhe okhulelwe wayengekhoyo. Emva kokwaziswa ngokukhohlisa kukaPeterson, uFrey waqhagamshelana namapolisa waza wavuma ukuncedisa uphando ngokubetha iifowuni zePeterson.
Iifowuni zikaPeterson kwiFrey zazihamba ngexesha leeholide. Ingxoxo enye ephawulekayo yenzeke ngoDisemba 31, xa uPeterson etshela uFrey ukuba wayeseParis kwisibini kunye nabahlobo kwaye uchaza "umonakalo" womlilo kwi- Eiffel Tower .
I-Frey igcina iQhagamshelana noPeterson
Ngelo xesha, uScott uxelele uLaci ulahleka ngo-6: 00 ngoDisemba 24, 2002, emva kokubuya kwakhe esuka ekulobeni lokuloba eMartay.
Ngomhla kaJanuwari 6, uPetererson wamukela kuFrey ngomtshato wakhe kunye nokushabalala komfazi wakhe. Wathetha malunga nophando kunye nokungabi namacala ngokubulala umfazi wakhe. Ngenyanga elandelayo, ngoFebhuwari 19, uFrey watshela uPeterson ukuba ayeke ukuthetha de kube yinto exazululwe ngokubulala umfazi wakhe. Peterson wavuma.
Ngo-Apreli 18, 2003, uPeterson wabanjwa waza wahlawuliswa ngamacala amabini okubulala nokuxilongwa kunye neemeko ezikhethekileyo: ukubulawa kwangaphambili kweLaci, kunye nokubulawa komntwana ongakazalwa. Wathetha inetyala.
I-Media Catches kwi-Frey-Peterson Affair
Ngomhla ka-Meyi 2003, u-Frey waqesha ummeli wodumo, u-Gloria Allred, ukunceda ngeendaba eziphathekayo zeendaba.
Iimvumi kunye neengcamango malunga neFrey zaziqhuba zasendle ngaphandle nangona wayese-tight-lipped and seclusion.
UDavid Hans Schmidt, umgqugquzeli, wabonakala ngewebhusayithi yokubhalisa ngokukhokhwa kweefoto ezingenanto zikaFrey ezithathwe kwi-agency ye-Clovis ye-modeling ngo-1999. I-Frey yamlandela, ithi akazange asayine isivumelwano sokushiya amalungelo akhe kwiifoto. Ekugqibeleni, uSchmidt wayevinjelwe "kwizentengiso" kwiifoto zeFrey.
Ngo-Agasti 2004, uFrey wangqina kwiCandelo likaPeter. Iinkcukacha ezisondeleyo zobudlelwane babo beeveki ezintandathu zityhilwa nguye kwaye iziqulatho zeengxoxo ezifakwe kwintetho zenziwe zikarhulumente.
Emva kobudlelwane bakhe noPeterson, uFrey waqala ukuthandana nomhlobo ongumdala uDkt. David Markovich ekuqaleni kuka-2003, isicrotractor yeFresno, owayenomntwana, uJustin Dean.
Ngo-2006, uFrey watshata noRobert Hernandez, ilungu lokuthotyelwa komthetho, eFresno, eCalifornia. Esi sibini satshatyalaliswa ngo-2008.
Usebenza njengengcali yomzimba kunye nombhali owaziwayo ngo-Amber Frey: INgqina loTshutshisi lanyatheliswa ngo-2005, Ukubulawa kukaLaci Peterson ngo-2017.
Umdlalo obulalayo nguCatherine Crier
UMninimzi kaScott Peterson: U-Amber Frey uvula iNdaba yakhe kwi-Oprah
UJennifer Hudson Family Wallers
Umntu olahlekileyo: u-Christina Morris
AmaGeorgia - Amalungelo amaxhoba olwaphulo-mthetho
Umbulali waseSomer Thompson
Izigebengu zabafazi, ababulali, abaxhasi, abaxhasi kunye nabaphangi A - Z
Ama-Famous Famous Cases ku-US
Izigwenxa zeNate Kibby
UColin Ferguson kunye neLong Island Railroad Massacre
Abahlaseli bamabhomu - Amacala okuThengwa koBantwana
UAmy Fisher, 'iLong Island Lolita'
Iprofayili yoMyeni uMbulali uKelly Gissendaner
'ILondon yaseBondon iwa phantsi' iChords
Ngaba Abantu Baya Kulala Ngesibindi?
AbaChwepheshe beBlue Early Blues
Uphi Uhlanga lweeArms?
Yintoni Eyenza Imifanekiso Efanelekileyo?
Ukugqithisa nokugqithisa ubuxoki
Ngaba iNkqubo yoNyulo lweNkonzo kunye neNkqutyana efunekayo?
Ukubhiyozela iSturnalia Festival
Iimviwo zeekholeji zeMillsaps
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi esithi 'Ukutshabalalisa' ('Ukuhlutha')
Iibhuloji zeRuby: I-Hero-Old Age ye-Six-Old Age ye-Civil Rights Movement
Nguwuphi ooMongameli abaye baxhaswa ngekhohlo?
Imfazwe YaseMerika Yombutho: USS Monitor
UMTHETHO Ufumana izikolo zokufakwa kwiiKholeji zeWisconsin neeYunivesithi
I-DigiPen Institute of Technology Admissions
Ukuguqulwa kweMilinganiselo yeBhayibhile
ULeon Trotsky wabulawa
'Imibuzo yePompo' yoFundo kunye neNgxoxo
I-Advent Wreath Prayer for Iveki yesine ye-Advent
Uvuko lwaqalisa Xa uYesu Kristu Wavuswa
Izinto ezi-25 Zonke iilwimi ezintsha zeLwimi lwaseTaliyane kufuneka zikwazi
Ngo-1998: I-Omagh ibhomu - iMbali ye-Omagh ibhomu eBhunga e-Ireland